Ezikiel 41 | Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl | Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ (2007)
Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Dairi) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Lee nke e degharịrị n'afọ 2021
Jenesis Ọpụpụ Levitikọs Ọnụ Ọgụgụ Diuterọnọmi Jọshụa Ndị Ikpe Rut 1 Samuel 2 Samuel 1 Ndị Eze 2 Ndị Eze 1 Ihe E Mere 2 Ihe E Mere Ezra Nehemaya Esta Job Abụ Ọma Ilu Ekliziastis Abụ Sọlọmọn Aịzaya Jeremaya Abụ Ákwá Ezikiel Daniel Hosia Joel Emọs Obedaya Jona Maịka Nehọm Habakọk Zefanaya Hagaị Zekaraya Malakaị Matiu Mak Luk Jọn Ọrụ Ndịozi Ndị Rom 1 Ndị Kọrịnt 2 Ndị Kọrịnt Ndị Galeshia Ndị Efesọs Ndị Filipaị Ndị Kọlọsị 1 Ndị Tesalonaịka 2 NdịTesalonaịka 1 Timoti 2 Timoti Taịtọs Faịlimọn Ndị Hibru Jems 1 Pita 2 Pita 1 Jọn 2 Jọn 3 Jọn Jud Mkpughe
41 O wee kpọbata m n’ụlọ nsọ ahụ, tụọ ogidi ndị dị n’akụkụ ya. Obosara ya dị kubit isii n’otu akụkụ, dịkwa kubit isii n’akụkụ nke ọzọ, ya bụ, obosara nke ogidi dị n’akụkụ. 2 Ọnụ ụzọ ya dị kubit iri n’obosara. Akụkụ abụọ nke ọnụ ụzọ ya dị kubit ise n’otu akụkụ, dịkwa kubit ise n’akụkụ nke ọzọ. O wee tụọ ogologo ya, ya adịrị kubit iri anọ; obosara ya dị kubit iri abụọ. 3 O wee banye n’ime tụọ ogidi dị n’akụkụ ọnụ ụzọ ya, ya adịrị kubit abụọ. Ọnụ ụzọ ahụ dị kubit isii; obosara ọnụ ụzọ ahụ dịkwa kubit asaa. 4 O wee tụọ ogologo ya, ya adịrị kubit iri abụọ; obosara ya dị kubit iri abụọ,+ n’ihu ụlọ nsọ ahụ. O wee sị m: “Ebe a bụ Ebe Kasị Nsọ.”+ 5 O wee tụọ ahụ́ ụlọ ahụ, ya adịrị kubit isii. Ụlọ nke dị n’akụkụ ya dị kubit anọ n’obosara gbaa gburugburu; ọ dị gburugburu ụlọ ahụ.+ 6 Ụlọ ndị dị n’akụkụ bụ ụlọ elu nwere okpukpu atọ,* otu n’elu ibe ya, nke ọ bụla n’ime ha nwere ọnụ ụlọ iri atọ; a rụnyekwara ọnụ ụlọ ndị ahụ gbaa gburugburu n’ahụ́ ụlọ ahụ, ka e wee nwee ihe jidere ha, ma e jikọtaghị ha na ahụ́ ụlọ ahụ.+ 7 Ọnụ ụlọ ọ bụla nke dị n’elu sara mbara karịa nke dị n’okpuru ya. Ebe gara okirikiri e si agbago n’elu ụlọ ahụ gbara ụlọ ahụ gburugburu.+ N’ihi ya, ụlọ ahụ sawanyere mbara gbagoo elu. Mmadụ pụrụ isi na nke ala gbagoo n’okpukpu nke mbụ, sikwa na ya gbagoo n’okpukpu nke abụọ.+ 8 M hụkwara na e nwere ebe a kpụliri elu gburugburu ụlọ ahụ. Malite na ntọala ọnụ ụlọ ndị ahụ dị n’akụkụ ruo n’ebe o nwere njikọ dị kubit isii zuru ezu ma e jiri okporo ahịhịa amị tụọ ya.+ 9 Obosara ahụ́ ọnụ ụlọ ahụ nke dị n’akụkụ dị kubit ise ná mpụta. E nwekwara ebe a na-arụghị ihe ọ bụla mgbe a na-ewu ọnụ ụlọ ndị ahụ dị n’akụkụ, bụ́ ndị a gbakwụnyere n’ụlọ ahụ. 10 Ohere nke dị n’agbata ụlọ iri ihe+ ndị ahụ na ụlọ ahụ dị kubit iri abụọ n’obosara gbaa gburugburu. 11 Ọnụ ụzọ nke ụlọ ndị ahụ, bụ́ ndị dị n’akụkụ, chere ihu n’ebe ahụ a na-arụghị ihe ọ bụla, otu ọnụ ụzọ dị n’ebe ugwu, otu ọnụ ụzọ adịrị na ndịda; ebe ahụ a na-arụghị ihe ọ bụla dị kubit ise n’obosara gbaa gburugburu. 12 Ụlọ nke dị n’ihu ebe dịpụrụ iche, n’ebe ọdịda anyanwụ, dị kubit iri asaa n’obosara. Ahụ́ ụlọ ahụ dị kubit ise n’obosara gbaa gburugburu; ogologo ya dị kubit iri itoolu. 13 O wee tụọ ụlọ ahụ, ya adịrị otu narị kubit n’ogologo; ebe ahụ dịpụrụ iche na ụlọ ahụ na ahụ́ ya niile dị otu narị kubit n’ogologo. 14 Ihu ụlọ ahụ na ebe ahụ dịpụrụ iche nke dị n’ebe ọwụwa anyanwụ dị otu narị kubit n’obosara. 15 O wee tụọ ogologo ụlọ ahụ nke chere ihu n’ebe ahụ dịpụrụ iche, ya bụ, nke dị n’azụ ya, tụọkwa veranda ya n’otu akụkụ, nakwa n’akụkụ nke ọzọ, ya adịrị otu narị kubit. Ọ tụkwara ụlọ nsọ ahụ na ebe dị n’ime+ na ihe owuwu ụzọ mbata ogige ahụ. 16 Ụzọ mbata ha niile, na windo ndị dị warara+ ná mpụta karịa otú ha dị n’ime, nakwa veranda dịcha ha atọ gburugburu. E ji osisi machie ahụ́ ụlọ ahụ gburugburu n’ihu ụzọ mbata ahụ,+ malite n’ala ụlọ ahụ ruo na windo ya; a kụchikwara windo ndị ahụ akụchi. 17 Ebe dị n’elu ọnụ ụzọ ahụ, ụlọ nke dị n’ime nakwa mpụta ya nakwa ahụ́ ụlọ dum gbara ụlọ ahụ dị n’ime gburugburu nakwa mpụta ya, a tụchara ha niile atụ̀. 18 E nwekwara cherọb+ na nkwụ a tụrụ atụ́.+ Nkwụ dị n’agbata otu cherọb na cherọb ọzọ. Cherọb ndị ahụ nwekwara ihu abụọ.+ 19 Ihu nke yiri ihu mmadụ chere nkwụ ahụ a tụrụ atụ́ ihu n’otu akụkụ ya. Nke yiri ihu nwa ọdụm tojuru etoju chekwara nkwụ ahụ ihu n’akụkụ ya nke ọzọ,+ a tụkwara ha n’ụlọ ahụ dum gbaa gburugburu. 20 Malite n’ala ụlọ ahụ ruo n’elu ọnụ ụzọ ahụ, e nwegasịrị cherọb na nkwụ a tụrụ atụ n’ahụ́ ụlọ nsọ ahụ. 21 Awara ụzọ nke ụlọ nsọ ahụ nwere akụkụ anọ há nhata.+ N’ihu ebe nsọ ahụ, e nwere ihe yiri ihe ndị a: 22 ebe ịchụàjà e ji osisi rụọ nke dị kubit atọ n’ịdị elu, ogologo ya dịkwa kubit abụọ, o nwekwara ogidi isi nkuku.+ E ji osisi rụọ ogologo ya nakwa ahụ́ ya. O wee sị m: “Ihe a bụ tebụl nke dị n’ihu Jehova.”+ 23 Ụlọ nsọ ahụ na ebe nsọ ahụ nwere ọnụ ụzọ abụọ.+ 24 Ọnụ ụzọ nke ọ bụla nwere ibo abụọ, ha abụọ pụkwara ịga ihu na azụ. Otu ọnụ ụzọ nwere ibo abụọ, nke ọzọ enweekwa ibo abụọ. 25 A tụkwara cherọb na nkwụ n’ahụ́ ha,+ n’ahụ́ ibo ụzọ nke dị n’ụlọ nsọ ahụ, dị ka ndị ahụ a tụrụ n’ahụ́ ụlọ ahụ. E jikwa osisi kụchie ihu ihe owuwu ụzọ mbata ahụ. 26 E nwere windo ndị dị warara+ ná mpụta karịa otú ha dị n’ime. A tụkwara nkwụ n’ebe dị iche iche n’akụkụ abụọ nke ihe owuwu ụzọ mbata ahụ nakwa n’ọnụ ụlọ ndị dị n’akụkụ ụlọ ahụ nakwa n’ihe e ji kụchie ihu ha.
^ Ma ọ bụrụ na a gụnye ala ala ya.
BAỊBỤL NSỌ—NSỤGHARỊ ỤWA ỌHỤRỤ NKE AKWỤKWỌ NSỌ (NKE E WEPỤTARA N'AFỌ 2007)
Ụdị Dị Iche Iche Họrọ ụdị nke ị ga-ewere Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ (Nke E Wepụtara n'Afọ 2007)
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Baịbụl Nsọ—Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Akwụkwọ Nsọ (Nke E Wepụtara n'Afọ 2007)
Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi?
Gwa Ndịàmà Jehova Ka Ha Bịa Mụwara Gị Baịbụl